Madaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee dalka Norway - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee dalka Norway
May 17, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Jaaliyada Puntland ee dalka Norway. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Oslo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xalay oo Arbaco ahayd kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa jaaliyada uga waramay xaaladaha ka jira gudaha Puntland.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo la hadlayay jaaliyada Puntland ee Norway. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Isaga oo ka hadlayay kulanka Madaxweynaha ayaa yiri: “”Puntland waxay qaaday dhabahii horumarinta, waxaan xooga saaraynaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo hurumarinta waxabarashada iyo caafimaadka.”
Kulanka ayaa waxaa ka qeybgalay jaaliyada Puntland ee gudaha dalka Norway iyo sidoo kale qurbajoog reer Puntland ah oo ka kala yimid wadamada dariska la ah Norway sida Sweden iyo Denmark.
Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii u dambeeyay safar ku marayay wadamada Yurub kadib markii uu ka qeybgalay shir-weynihii Soomaalida ee lagu qabtay magaalada London ee dalka UK.